वर्षमा कतिले बढ्यो सुनको मूल्य? - Everest Dainik - News from Nepal
वर्षमा कतिले बढ्यो सुनको मूल्य?
काठमाडौंः नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा एक वर्षमा करिब १३ हजार आठ सय रुपियाँले मूल्य वृद्धि भएको छ । सोमबार नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७३ हजार तीन सय रुपियाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ७३ हजार रुपियाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष २०७५ पुस १४ गते सुनको मूल्य प्रतितोला ५९ हजार पाँच सय रुपियाँ थियो । उक्त महिनामा यसको अधिकतम मूल्य ६० हजार सात सय रुपियाँ कायम भएको थियो ।
गत असोजमा सुनको मूल्य बढेर ७३ हजार पाँच सय रुपियाँसम्म पुगेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भन्छन्, अबको केही दिनमा नयाँ रेकर्ड बनाउने सङ्केत देखापरेको छ ।
सुनको मूल्य आश्चर्यजनक रूपमा वृद्धि हुनेमा आन्तरिक कारण मात्र चाँहि होइन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस १९ तोला सुनसहित दुई जना पक्राउ
अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यसको मूल्य प्रतिऔँस करिब एक हजार दुई सय अमेरिकी डलर कायम भएको थियो । सोमबार भने एक हजार ५१२ डलरभन्दा बढीमा पुगेको छ । सुनसँगै नेपाली बजारमा डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पनि नेपालमा अधिक मूल्य वृद्धि हुन पुगेको हो । नेपाली बजारमा अमेरिकी डलर ११४.४८ रुपियाँमा बिक्री भएको छ ।
त्यसका साथै एक नेपाली सुनको भन्सार दर पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रति १० ग्राम चार हजार दुई सय रुपियाँ भन्सार दर कायम गरिएकोमा चालू आवमा दुई पटकसम्म भन्सार दर बढाइएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा पाँच हजार रुपियाँ भन्सार दर तोकिएको थियो । त्यसपछि गत असोजमा पुनः बढाएर छ हजार पाँच सय रुपियाँ पुर्याइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार?
विवाहलगायतका अन्य शुभकार्यका लागि अफ सिजन भएका कारण नेपाली बजारमा सुनको किनबेच शून्यजस्तै भएको पूर्वअध्यक्ष शाक्य बताउँछन् । पुसको अन्तिम सातापछि भने बजारमा केही चहलपहल देखिएला भन्ने आशा छ ।
सुनसँगै चाँदीको पनि मूल्य बढेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा प्रतितोला ७६५ रुपियाँमा किनबेच भएको चाँदीको मूल्य सोमबार ८९० रुपियाँ कायम भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाली बजार, सुन
ओली र मध्यपन्थी धारका नेताहरुबीच स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने सहमति, १०० बढी नेतासहित माधव नेपाल रिसोर्टमा
निर्वाचन आयोगले संसद सचिवालयसँग माग्यो माधव पक्षका सांसदको विवरण
ओलीकाे जस्ताे बेइमानी नगरि उखु किसानकाे बक्यौता तत्काल उपलब्ध गराउन किसान संगठनहरुकाे माग
माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेतृत्व छनौटको जिम्मा प्रदेश कमिटीलाई
माओवादी केन्द्रले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माणका लागि पहल गर्ने